Osaka City University - Ọmụmụ na Japan. International Mmụta
acronym : OCU
tọrọ ntọala : 1880
Students (ihe ruru.) : 9000
Echefukwala -atụle Osaka City University
Debanye aha na Osaka City University
Osaka City University-eme ememe ya 135th ncheta na 2015. Ọ bụ ugbu a ndị kasị ibu ọha mahadum dị na Japan, na 8 n'ahụ na 10 gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, àjà okokporo, nwe-na doctoral ọmụmụ na a dịgasị iche iche nke ọzụzụ. N'oge nke ya oruru, onyeisi obodo nke Osaka, Hajime Seki, nyere anyị a pụrụ iche ozi: "The ọhụrụ mahadum ekwesịghị ịbụ ihe nṅomi nke mba mahadum; ọ ga-egbo mkpa nke ụmụ amaala; -eduzi mbụ nnyocha ọ na-omenala, aku na uba, na otu onye obodo Osaka na-ekwurịta okwu na ya pụta na ndị obodo ahụ. "Ya ọhụụ na-nọgidere ya nsọpụrụ anyị ruo taa.
Nsogbu Osaka bụ otu nsogbu obodo gburugburu ụwa. Ebe a na OCU, ị ga-enwe ohere iji nweta akwụkwọ ma debe nnyocha na ga-aka ka ị chọta ihe ngwọta maka nsogbu ndị dị otú ahụ dị ka mgbanwe ihu igwe, ọcha ume ọkọnọ, obodo mepere emepe ahụ ike, na ọdachi, nsogbu nke nwere ike na-edozi site na ijikọta zuru ụwa ọnụ na mpaghara echiche.
Akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ a njirimara ebipụtawo abụọ Nobel Laureates, Prọfesọ Emeritus Yoichiro Nambu na Physics na prọfesọ Shinya Yamanaka na Medicine. Na nke a dị uchu spirit, OCU aims ịzụlite ndị nwere ike buru na onye ndu ọrụ na otu, -eduzi emesapụ na mbụ nnyocha na ihe mba ozo ma na-npako nke obodo.
OCU-enye gị a iche iche ma na-emesapụ ọgụgụ isi ọnọdụ nke na ị ga-enwe ike kpam kpam-atụle na ịzụlite gị echiche, mgbe na-eji nke magburu onwe interdisciplinary nnyocha na nnyocha ụlọ ọrụ na a siri ike ụlọ na ndị mba agụmakwụkwọ na netwọk. Anyị na-agba unu nile na-abịa ma na iso anyị n'idozi nsogbu nke ndị na ọdịnihu anya.
President of Osaka City University
Iji mezuo nke eluigwe na ala ozi nke a university- ndị na eme nke elu talent na-achọ eziokwu.
Na-a mahadum na na ụmụ amaala nwere ike ịbụ mpako ut u ebe
Ka ewere obodo ahụ dị ka a isiokwu maka ọmụmụ ihe na-ahụ nwere ọgụgụ isi ngwọta maka ya kpọmkwem nsogbu.
Iji kwụghachi mkpụrụ nke muta na nnyocha omume ka obodo ahụ na ụmụ amaala na-eme ka mmepe nke ma ndị obodo na mba na otu.
Na-a mahadum na dị nso ka citizens-
Na-ebu na omenala na ọdịbendị nke obodo Osaka, dị ka mepere emepe dabeere na mahadum.
Iji na-akwalite emesapụ na ihe muta na nnyocha, na ụkpụrụ dị elu ike na-elekọta.
Iji melite ọrụ dịgasị iche iche nke obodo ndị dị otú ahụ dị ka omenala, aku na uba, ụlọ ọrụ, na nlekọta ahụ ike, ọnụ na ụmụ amaala, na-agbali iji na-aghọta ọnọdụ nke ezi akụ na ụba.
Undergraduate ụlọ akwụkwọ
Faculty of Literature na Human Sciences
gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ
Gụsịrị akwụkwọ School of Economics
Gụsịrị akwụkwọ School of Law
Gụsịrị akwụkwọ School of Literature na Human Sciences
Gụsịrị akwụkwọ School of Science
Gụsịrị akwụkwọ School of Engineering
Gụsịrị akwụkwọ School of Medicine
Gụsịrị akwụkwọ School of Nursing
Gụsịrị akwụkwọ School of Human Life Science
Gụsịrị akwụkwọ School of Creative Ọnọdụ
Osaka City University (OCU) emi esịnede asatọ n'ahụ na iri gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ. OCU kọrọ ya mmalite ka 1880 tọọ ntọala Osaka Commercial Ọzụzụ Institute, etiti nke azụmahịa na ulo oru ọmụmụ na Osaka. The Institute e renamed dị ka ọ na mepụtara na-eto, -aghọ Osaka City Commercial School (1889), Osaka City Commercial College (1901), Osaka University of Commerce (1928), na n'ikpeazụ Osaka City University na 1949. na April 2006, Osaka City University e reconstituted dị ka a ọha mahadum ụlọ ọrụ.
Guzosie ike OCU dị ka Japan mbụ ọchịchị mahadum, Dr. Hajime Seki, onyeisi obodo nke Osaka, weputara a pụrụ iche ọhụụ. The ọhụrụ mahadum ekwesịghị ịbụ ihe nṅomi nke mba mahadum; ọ ga-egbo mkpa nke ụmụ amaala; ọ ga-eduzi mbụ nnyocha ọ na-omenala, aku na uba, na otu onye obodo Osaka na-ekwurịta okwu na ya pụta na ndị obodo. N'akụkụ ya nile afọ 70 akụkọ ihe mere eme, Osaka City University ka ikwesị ntụkwasị obi gbasoo a tọọ ntọala ọhụụ site na-eme n'obodo ndị mepere emepe mbipụta otu onye nke Central nchegbu.
Ị chọrọ -atụle Osaka City University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Osaka City University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Osaka City University.
Ndị ọzọ na mahadum na Japan
Osaka University ụlọ